Burma National News - Dagon Taryar Comprehensive news coverage on all spheres of life in Burma from around the world through the lens of freedom of expression.
Dagon Taryar Dagon Taryar (a) Dagon Taya (a) Htay Myaing, 10 May 1919 – 19 August 2013, native of Dedaye, Irrawaddy, renowned writer and poet, political prisoner 1962-66, gagged by Censorship Board, National Literary Award 2000, Aungban, Shan State. Father: Ba Ohn; mother: Phwa Shin. Peace movement: No enemy, only friend; no hatred, only love. Politics is making friends who are enemies.
ဧရာဝတီ၊ မင်းဇင်၊ ၂၀ ဩဂုတ် ၂၀၁၃ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း အောင်ပန်းမြို့ နေ အိမ်တွင် ဩဂုတ်လ ၁၉ ရက်က ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည့် အသက် ၉၅ နှစ်အရွယ် စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ ငြိမ်းချမ်းရေး ၀ါဒီ ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာသည် ဝေဖန်ရေးဆရာများနှင့် နိုင်ငံရေး အမြင်မတူသူများ၏ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုများ ရှိနေသော်လည်း ယုံကြည်ချက်ကို အလံမလှဲခဲ့သူ မြန်မာနိုင်ငံ စာပေလောက၏ ကြီးကျယ်သော ရုပ်ပုံလွှာတခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့ဘဝသည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု အထူးသဖြင့် ခေတ်ပေါ်စာပေနှင့် ကဗျာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှု ရေစီးကြောင်းနှင့် ခွဲမရပေ။၂၀ ရာစုသို့ ကူးပြောင်းချိန်တွင် မြန်မာ့စာပေသည် ရိုးရာအစဉ်အလာ ဂန္ထ၀င်ဟန်မှနေ၍ ထင်ထင်ရှားရှား ခွဲထွက်လာခဲ့ သည်။ ၁၉၀၄ ခုနှစ်တွင် ဂျိမ်းစ်လှကျော်က ပြင်သစ်စာရေးဆရာကြီး Alexandre Dumas ၏ The Count of Monte Cristo ၀တ္ထုကို တစိတ်တပိုင်း မှီငြမ်း၍ “မောင်ရင်မောင် မမယ်မ” အမည်ဖြင့် ပထမဆုံးသော မြန်မာခေတ်သစ် ၀တ္ထုအဖြစ် ရေးဖွဲ့ခဲ့သည်။ မြန်မာ့စာပေသမိုင်းတွင် ကဏ္ဍသစ်တရပ် ဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုတီထွင်ဆန်းသစ်မှု က အခြားသူများကိုလည်း အနောက်တိုင်းစာပေများ အပါအ၀င် ကမ္ဘာ့စာပေကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် မြန်မာစာပေ အရေးအသားကို ဆန်းသစ်အောင် အားထုတ်ရာတွင် များစွာအထောက်အကူပြုမည် ဆိုသည့်အချက်ကို သိရှိနိုင်စေခဲ့သည်။၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက် တက္ကသိုလ် အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသူများ အထူးသဖြင့် J S Furnivall တည်ထောင်သော မြန်မာနိုင်ငံ ပညာပြန့်ပွားရေး အသင်းတို့သည် နိုင်ငံခြားစာပေများကို မြန်မာတို့ ဖတ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံခြားစာပေလက်ရာများကို မှီငြမ်းသည့် မြန်မာဘာသာ စာပေများ ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ထိုလှုပ်ရှားမှု အသစ်တွင်ပါဝင်ခဲ့ကြသော စာရေးဆရာများသည် ၀တ္ထုတိုများ ကဗျာများ အပါအ၀င် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လက်ရာများကိုလည်း ရေးသားခဲ့ကြသည်။ယခုအခါတွင် “ခေတ်စမ်းစာပေ” ဟုခေါ်တွင်သည့် ခေတ်ပေါ်စာပေ လှုပ်ရှားမှုတွင် အကျော်အမော် စာရေးဆရာ ၃ ဦး ပေါ် ထွက်ခဲ့ရာတွင် သိပ္ပံမောင်ဝသည် ရှင်းလင်း ထိမိသော စကားပြေအရေးအသားကြောင့် ထင်ရှားပြီး ဇော်ဂျီ နှင့် မင်းသုဝဏ် တို့သည် သူတို့၏ လေ့လာစူးစမ်းမှု အားကောင်းခြင်းနှင့် ပြည်သူတို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀နှင့် သဘာဝတရား၏ အသေးစိတ်များကို ထင်ဟပ်ဖော်ပြနိုင်သည့် ကဗျာများကို ရေးဖွဲ့နိုင်ခဲ့ခြင်းအတွက် လေးစားချီးကျူးခံခဲ့ရသည်။ စိတ်ကူးယဉ် ၀ါဒသမားများ ဟု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည့် William Wordsworth ၊ P B Shelley၊ John Keats နှင့် Rabindranath Tagore တို့၏ ရေးဟန်နှင့် အမြင်များက ခေတ်စမ်း စာရေးဆရာများအပေါ် အလွန်လွှမ်းမိုးခဲ့ကြသည်။နောက်ပိုင်းကာလရောက်သည့် အခါ ဝေဖန်သူအများအပြားက ခေတ်စမ်းစာပေလှုပ်ရှားမှုသည် အနုပညာပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကြီးမားစွာထောက်ပံ့ပေး နိုင်ခဲ့သော်လည်း ထိုအချိန်က ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီလက်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေးရရှိရန် တောင်းဆိုမှုများ တိုးပွားလာနေ သည့် တနိုင်ငံလုံး၏ ခေတ်ပြိုင် နိုင်ငံရေးဆန္ဒများကို ထင်ဟပ်ပြသနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ဟု ထောက်ပြခဲ့ကြသည်။ကိုလိုနီခေတ်ကာလတလျှောက် မြန်မာ့စာပေလောကတွင် သြဇာကြီးမားသော ပုံရိပ်မှာ သတင်းစာဆရာ၊ ပြဇာတ်ရေး ဆရာ၊ ကဗျာဆရာနှင့် သမိုင်းပညာရှင်အဖြစ် အများက လေးစားကြည်ညိုကြသော သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ဖြစ်သည်။ သူ၏ အောင်မြင်သော စာပေလက်ရာများ သည် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်နိုးကြားလာစေပြီး မေတ္တာ၊ ကရုဏာ နှင့် မြန်မာတို့၏ အတိတ် သမိုင်းကြောင်းများ အပြင် ခေတ်ပြိုင်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုပါ သရုပ်ဖော်နိုင်ခဲ့သည်။ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းသည် ရှေးရိုးဟန်ဖြင့် ကဗျာ လင်္ကာအဖွဲ့အနွဲ့များ သုံး၍ ရေးသားသူဖြစ်သော်လည်း သူနှင့် ခေတ်ပြိုင်များ အတွင်းတွင် သူတို့ ခေတ်အခါ၏ နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်များ နှင့် အနုပညာရသကို အောင်မြင်စွာ ပေါင်းစပ် ရေးသားနိုင်သူအဖြစ် လေ့လာဆန်းစစ်သူများက လက်ခံသဘောတူခဲ့ကြသည်။ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်း နှစ်များတွင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော လူငယ်စာရေးဆရာများသည် ကိုလိုနီစနစ်နှင့် ဖက်ဆစ်ဝါဒကို ခက်ခဲစွာ ရင်ဆိုင် ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသော အတွေ့အကြုံများ၏ နက်ရှိုင်းစွာသက်ရောက်မှုကိုခံစား ကြရသည်။ ထို့ပြင် စစ်ပြီးကာလတွင် ရေပန်းစားခဲ့သော လက်ဝဲယိမ်းသည့် နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်များ၏ လွှမ်းမိုးခြင်းကိုလည်း ခံခဲ့ရသည်။နောက်ဆုံးအချိန်ထိ လှပသော ကဗျာများ၊ ၀တ္ထုတိုများ၊ ၀တ္ထုရှည်များနှင့် အတွေးအမြင်မှတ်တမ်းများကို ရေးသားနေခဲ့သော ဒဂုန်တာရာကို စစ်ပြီးခေတ် တိုးတက်သော လူငယ်စာရေးဆရာများ၏ ခေါင်းဆောင် အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုခဲ့ကြသည်။ စစ်ပြီးခေတ်တွင် သူက “စာပေသစ်” ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် “အနုပညာသည် ပြည်သူ့အတွက်” ဆိုသည့် သရုပ်မှန်စာပေ အယူအဆကို မြှင့်တင်ပေးသည့် တာရာ မဂ္ဂဇင်းနှင့် ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်အားဖြင့် ဒဂုန်တာရာသည် ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ နိုင်ငံရေး အသားပေးသည့် စာပေမျိုးကို တိုက်ရိုက်အမွေ ဆက်ခံသူ ဖြစ်ပြီး တင်ပြပုံ နည်းလမ်းနှင့် ရှုမြင်သုံးသပ်မှုကို ပို၍ခေတ်မီလာအောင် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။လေ့လာသူအချို့က ဒဂုန်တာရာ၏ စာပေလက်ရာများသည် သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ ရေးဟန်နှင့် လွတ်လပ်ရေးအကြို ခေတ်က ခေတ်စမ်းစာရေးဆရာတို့၏ ဟန်ကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဖွင့်ဆိုကြသည်။ ခေတ်စမ်းစာပေ၏ ရှေ့ ဆောင်တဦး ဖြစ်သော ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ် ကလည်း ဒဂုန်တာရာ၏ စာပေသစ်လှုပ်ရှားမှုကို “ခေတ်စမ်း၏ ခေတ်စမ်း” ဟု အမည်တပ်ခဲ့၏။ဒဂုန်တာရာနှင့် သူ၏မိတ်ဆွေများသည် ခေတ်စမ်း၏ အသွင်သဏ္ဍန်ကိုသာ ချိုးဖျက်ခဲ့သည်မဟုတ်ဘဲ ခံစားနိုင်စွမ်းနှင့် ရေးဟန်ကိုပါ ပြောင်းလဲခဲ့ကြသော်လည်း ကဗျာရေးသည့်အခါ ခေတ်စမ်းဆရာတို့၏ ကာရန် သဘောတရားကို ဆက်လက်သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ ဒဂုန်တာရာ၏ စာပေလှုပ်ရှားမှုသည် အံ့အားသင့်ဖွယ် ကောင်းလောက်အောင်ပင် ယနေ့ထိ ဆက်လက် လွှမ်းမိုးနေဆဲ ဖြစ်သည်။သို့သော်လည်း ဝေဖန်ခံရခြင်းမှ ဒဂုန်တာရာ မကင်းလွတ်ခဲ့ပါ။ သူနှင့် ခေတ်ပြိုင်စာပေသမားများ၊ အထူးသဖြင့် အခြားသော ပြည်သူ့စာပေဂိုဏ်းသားများက ဒဂုန်တာရာ၏ စာရေးဟန်သည် အဆန်းထွင်လွန်းပြီး လက်တွေ့မဆန်ဘဲ စိတ္တဇ ဆန်ဆန် စိတ်ကူးယဉ် အရေးအသားတွေဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့ကြသည်။ဒဂုန်တာရာသည် စာပေကို ဦးဆောင်သူ ပုံရိပ်တခုအဖြစ်သက်သက်သာမကဘဲ ကျော်ကြားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆောင်ရွက်သူ တယောက်လည်း ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စများတွင်ပါ ထိထိ ရောက်ရောက် ပါဝင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံရေးအရ ဖိနှိပ်မှုများလည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းယူလိုက်ပြီးနောက်တွင် ကွန်မြူနစ်အဖြစ် စွပ်စွဲခံရပြီး လေးနှစ်ကြာ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံ ခဲ့ရသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းအရကြည့်လျှင် ဒဂုန်တာရာကို အေးချမ်းတည်ငြိမ်သူ၊ အများနှင့် လိုက်လျော ညီထွေ နေနိုင်သူ အဖြစ်မြင်ရသော်လည်း ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်ကိုတော့ မလွတ်တမ်း ဆုပ်ကိုင်ထားတတ်သူလည်း ဖြစ်သည်။သူသည် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးသူရဲကောင်း ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နှင့် အလွန် ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်သည်။ ဂျပန်ခေတ်တွင် အစိုးရ ရာထူးကြီးကြီး တခု ယူဖို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ကမ်းလှမ်းခဲ့သေးသော်လည်း ဒဂုန်တာရာက ငြင်းပယ်ခဲ့၏။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံမခံရမီ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ဒဂုန်တာရာက “အောင်ဆန်း သို့မဟုတ် အရိုင်း” အမည်ရှိသည့် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏အကြောင်း အလွန်လက်ရာမြောက်သော်လည်း ပြင်းထန်စွာဝေဖန်ခြင်းများရရှိခဲ့သည့် အက်ဆေး တပုဒ် ရေးသားခဲ့သည်။သူတို့၏ ခေါင်းဆောင်ကို ယခုလို ပုံဖော်ရေးသားခဲ့ခြင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားများစွာ အံ့အားသင့်ခဲ့ကြသော်လည်း ဒဂုန်တာရာနှင့် ကာယကံရှင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကမူ ထိုအက်ဆေးကို တာရာ မဂ္ဂဇင်းတွင် ပထမဆုံး အကြိမ် ဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက် ထွက်ပေါ်လာသော အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဝေဖန်မှုများကို အပြုံးမပျက် တုန့်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ဒဂုန်တာရာ၏ နောက်ထပ်ရဲရင့်မှုတခုမှာ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း၏ ဆိုရှယ်လစ် အာဏာရှင် အစိုးရလက်ထက်၌ လွတ်လပ် ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သူများကိုချီးမြှင့်သော ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုကို ငြင်းပယ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်ဆုသည် လစဉ် ထောက်ပံငွေလည်းပေးသည့် အတွက် ကျော်ကြားသည့် မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ သစ္စာရှိမှုကို ယူနိုင်ရန် အတွက် လာဘ်ငွေပေးခြင်းတမျိုးဟု သူက ယူဆခဲ့၏။ ဆု ကို လက်ခံယူရန် ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးနောက် ဒဂုန်တာရာသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကို နယ်နှင်ဒဏ်ပေးသည့် အနေဖြင့် မြို့တော် ရန်ကုန်ကို စွန့်ခွာသွားခဲ့ပြီး သူ၏ကျော်ကြားသော ကဗျာတပုဒ်တွင် ကိုယ့်ကိုယ် ကို မဲဇာပို့လိုက်ခြင်းဟု ရေးသား စပ်ဆိုခဲ့ပါသည်။“သူက အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အမြင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Boris Pasternak လို ဖြစ်လာတယ်လေ။ မဲဇာ ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံရေး အစဉ်အလာမှာ ဘုရင်တွေက သူတို့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေကို နယ်နှင်ဒဏ်ပေးတဲ့ နေရာပါ။ ဆိုဗီယက် ခေတ်က gulags လို နေရာမျိုးပေါ့” ဟု လူငယ် ကဗျာဆရာ တယောက်က မှတ်ချက်ချ ပြောပြသည်။လက်ဝဲအယူအဆကို ယုံကြည်သူဖြစ်သော်လည်း သူ၏ဘ၀နေထိုင်မှုမှာရော သူ၏ အသိအမြင်တွေမှာပါ အများ လက်ခံကြ သည့် ဆိုရှယ်လစ်အယူအဆများကို ထုတ်ပြနေစရာမလိုဟု ဒဂုန်တာရာက ယူဆခဲ့သည်။ သူ့ကိုယ်သူ လူပုံအလယ်တွင် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သူဟု ကိုယ်ရည်သွေး ပြောခြင်းကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်ခဲ့သည်။ ဘ၀ သက်တမ်း တလျှောက်လုံးတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်လည်း ကင်းရှင်းအောင် နေထိုင်ခဲ့၏။ရှည်လျားကောက်ကွေ့သော ဆံပင်များရှိပြီး ဘန်ကောက် ပိုးလုံချည်နှင့် အရောင်စုံ အင်ဒိုနီးရှား ပါတိတ်ရှပ် အင်္ကျီများကို ၀တ်ဆင်လေ့ရှိသော ဒဂုန်တာရာသည် သူ၏သက်တမ်းတလျှောက်လုံးကို လူပျိုကြီး ဘ၀ဖြင့် ကျော်ဖြတ်ခဲ့သူ လည်း ဖြစ် သည်။ ရန်သူမရှိ မိတ်ဆွေသာရှိသည် ဟုပြောလေ့ရှိသော သူ၏ လွတ်လပ်သော စိတ်ခံစားမှုသဘာဝကို ပန်းချီဆွဲခြင်း၊ စန္ဒရားတီးခြင်းဖြင့် ဖော်ထုတ်ပြရခြင်းကို သဘောကျသည်။၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် အနောက်တိုင်း ခေတ်ပြိုင်စာပေ၏ အကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးမှုခံရသည့် လူငယ် ကဗျာဆရာ မျိုးဆက်သစ်တခု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ သူတို့က ဗီယက်နမ် စစ်ပွဲနှင့် နယ်ချဲ့ စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ကြသည်။ အစဉ်အလာကို ချိုးဖျက်ပြီး ကာရန် မပါသော လွတ်လပ်သည့်ပုံစံဖြင့် ကဗျာတွေကို စတင်ရေးဖွဲလာကြသည်။ အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး မဟုတ်သော်လည်း သူတို့၏ ကဗျာများတွင် မကြာခဏဆိုသလို ပါဝင်လာတတ်သည့် လူမှုရေး မမျှတမှု အကြောင်းတွေကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း စစ်အစိုးရနှင့်နီးစပ်သော ရှေးရိုးစွဲသမားတွေ၏ ခါးခါးသီးသီး ဝေဖန် တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံကြရသည်။ဂန္ထ၀င်စာပေကို ဖျက်ဆီးသူများ၊ ကွန်မြူနစ်များ အဖြစ် စွပ်စွဲခံရသော ထိုလူငယ်ကဗျာဆရာများဖက်မှ ဒဂုန်တာရာက မားမားမတ်မတ် ရပ်တည် ကာကွယ်ပေးခဲ့သည်။ ဂန္ထ၀င်နှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိနားလည်ထားလျှင် ကောင်းသည် မှန်သော်လည်း ကဗျာဆရာကို မည်သည့် အရာကမျှ တင်းကျပ်စွာ ချုပ်ကိုင်ထားရန် မလိုအပ်ဟု ဒဂုန်တာရာက ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောခဲ့၏။၁၉၈၈ ခုနှစ်သို့ရောက်သည့် အခါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို တောင်းဆိုမှုများက ထိပ်တန်းသို့ ရောက်လာသည်။ စာရေးဆရာ ကြီးငယ်မရွေး ဒီမိုကရေစီရရှိရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်လာကြ၏။ ထိုအချိန်မှ စ၍ သူတို့၏ မကျေနပ်မှုများ၊ ရပ်တည်ချက်များနှင့် ဒီမိုကရေစီဆန်သည့် လူ့အသိုက်အ၀န်းကို မျှော်လင့်ခြင်းများ ဖော်ပြသည့်အခါတွင် စာပေစိစစ်ရေးကို လှည့်စားနိုင်ရန် အတွက် Surrealism၊ Magic realism နှင့် Stream-of-consciousness စသည့် ပုံစံနှင့် နည်းစံနစ် အမျိုးမျိုး သုံးစွဲ၍ ရှုပ်ထွေးစွာ ရေးသားလာကြသည်။ထိုအချိန်တွင် ဒဂုန်တာရာ သည် စာပေများ ဆက်လက်ရေးသားနေဆဲဖြစ်သော်လည်း အသက်အရွယ်ကြောင့် အမြင် အာရုံ အားနည်းချို့ယွင်းနေပြီ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေး ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲကို ဘာလင်တံတိုင်း ပြိုကျခဲ့ပြီးနောက် ရေးသားသော “နှင်းခဲပျော်ချိန်” အမည်ရှိ ကဗျာတွင်ထည့်သွင်း ရေးသားခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေး တရားသေ၀ါဒနှင့် အနုပညာ မလွတ်လပ်မှုတို့၏ ရလဒ်အဖြစ် လူတိုင်းရော နိုင်ငံများပါ ပြိုလဲပျက်စီးနိုင်ကြောင်း ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။မြန်မာစာပေတွင် သရုပ်မှန်ဝါဒမှ ခွဲထွက်လာရခြင်း အကြောင်းထဲတွင် ခေတ်ပြိုင် အခြေအနေများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက နားလည်နိုင်သော်လည်း ကံမကောင်းသည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်း ရှိခဲ့သည်။ ငယ်ရွယ်သော စာရေးဆရာများက ဖွံ့ဖြိုးလာသော သရုပ်မှန် မဟုတ်သည့် အရေးအသားဖက်ကို ပိုမိုတိမ်းညွှတ်သွားကြပြီး သရုပ်မှန်ဝါဒကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ကြတော့သည်။၁၉၉၀ နှစ်များ၏ အစောပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မော်ဒန်နှင့် ပို့စ်မော်ဒန် အယူအဆများနောက်သို့လိုက်သူ အမြောက် အများပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး အလှအပခံစားမှုနှင့် နိုင်ငံရေးအရ ပေါ်လွင်ထင်ရှားသော လက်ရာများ ရှိခဲ့သည်။ များသောအားဖြင့် သူတို့သည် လူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရေးသားသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှနေ၍ လုံးလုံးလျားလျား ခွဲထွက်လာသည့် စာပေများကို ဖန်တီးခဲ့ဟန်ရှိသည်။“စတင်မိတ်ဆက်လာတဲ့ အယူအဆအသစ်တွေကို လက်ခံကြိုဆိုဖို့ လို့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေက လိုတာထက် ပို များလာတော့ လူငယ်စာရေးဆရာတွေဟာ လက်ရှိအခြေအနေကို ထင်ဟပ်ပြဖို့ဆိုတာနဲ့ ဝေးကွာသွားကြတယ်” ဟု မန္တလေးမြို့မှ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာ တဦးက ပြောသည်။တိုင်းပြည်အတွက် ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ တာဝန်ထမ်းကြရန် စစ်အစိုးရ၏ အနုပညာကို အသုံးချ၍ ၀ါဒဖြန့်ခြင်းကို တုန့်ပြန် သည့်အနေဖြင့် အနောက်တိုင်းအတွေးအခေါ် အယူအဆများ နောက်ကို မျက်စေ့မှိတ်လိုက်မိကြသော လူငယ်စာရေးသူ အချို့သည် “အနုပညာသည် ဘာအတွက်မှ မဟုတ်” ဆိုသည့် အယူအဆနောက်သို့ လိုက်သူများ အဖြစ် ကိုယ်ကိုယ်ကို ကြေညာကာ အစွန်းဖက်ဆီသို့ ပိုရောက်သွားကြသည်။၁၉၉၀ နှစ်များ၏ အလယ်ပိုင်းလောက်ရောက်သည့် အချိန်တွင် ဒဂုန်တာရာသည် အဆိုပါ အုပ်စုတခု၏ တိုက်ခိုက်မှုကို ခံခဲ့ရသည်။ ကွန်မြူနစ်ဟောင်းများ၊ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း၏ မဆလပါတီဝင်ဟောင်းများနှင့် လူငယ် စာရေး ဆရာ အချို့ပါဝင်သည့် ထိုအဖွဲ့က ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲပြီး မျိုးဆက်သစ်စာရေးဆရာများကို တားဆီး နှောက်ယှက် နေသူ ဟု စွပ်စွဲခဲ့ကြသည်။ (“တာရာခေတ်ကို ရိုက်ချိုးကြ” “ကတ္တီပါ လမ်းခွဲ” စသည့်အသံများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။)“ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အစီအစဉ် တခု ရှိပုံရတယ်။ သူတို့က ဒဂုန်တာရာကို ကွန်မြူနစ်ဟောင်းလို့ တံဆိပ်ကပ်ပြီး လူသိထင်ရှား နာမည်ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ ဒီလို စွပ်စွဲတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းအတွက် စစ်အစိုးရက ကျေနပ်နှစ်သိမ့်နေမယ် ဆိုတာက သံသယရှိစရာ မလိုပါဘူး” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသောစာရေးဆရာကြီး တဦး သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ တိုက်ခိုက်ခံနေရသည့် အနေအထားကို ရောက်ရှိနေခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ ဒဂုန်တာရာနှင့် နီးစပ်သော သမိုင်းပညာရှင် တယောက်က သုံးသပ်သည်။သူက ဒဂုန်တာရာကဲ့သို့ မြန်မာ ခေတ်ပေါ်စာပေသမိုင်းမှ သက်ရှိခံတပ်ကြီး တဦးကို တိုက်ခိုက်ခြင်းမှာ မတော်တဆ တိုက်ဆိုင်မှု လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဟု သုံးသပ်သည်။ “မြန်မာစာပေ လှုပ်ရှားမှုဟာ လူစုကွဲနေပြီ။ သူ့ဖာသာ ခွဲခြား ပစ်လိုက်တာ” ဟု လည်းအဆိုပါ သမိုင်းပညာရှင်က မှတ်ချက်ပေးသည်။ ထို့ပြင် တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေသော စစ်အစိုးရက သြဇာ ရှိသော စာပေပညာရှင်ကြီးများနှင့် အခြားသော လက်ဝဲ အယူအဆ လေ့လာလိုက်စားသူများကို ခြိမ်းခြောက်မှု တခုအဖြစ် သဘောထားသည် ဟု သူက ထပ်ပြောသည်။ဒဂုန်တာရာ၏ သည်းခံနိုင်မှုစွမ်းအားကို သရုပ်ပြပေးသလို ဖြစ်ခဲ့သော တိုက်ခိုက်ထိုးနှက်မှုများ အနည်ထိုင် သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ သူက ထိုအဖြစ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ လူမှုရေး နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေကို နက်ရှိုင်း စွာ သတိထားရာမှ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်ဟု ထင်မြင်ပုံရသည်။ အသိပညာနှင့် စိတ်ခံစားမှုတွင် နစ်မြုပ်စီးမျောခြင်းက အနာဂါတ်အတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ဦးတည်ရာကို အသည်းအသန် လိုက်လံရှာဖွေနေသည့် လူငယ်စာရေးဆရာများကို ဖိစီးနှိပ်စက်ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်ဟု သဘောထားခဲ့သည်။ ဒဂုန်တာရာ စာရေးဆရာများသည် မိမိတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ထိတွေ့ပတ်သက်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်အောင် မစွမ်းဆောင်နိုင် ဆိုသည့် သူ၏ ယုံကြည်မှုကို ထပ်ပြောသည်။“အနုပညာကို သူတို့ရဲ့ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေဆီကနေ ဘယ်သူမှ ခွဲမထုတ်နိုင်ဘူး” ဟု ဒဂုန်တာရာ ရေးသားခဲ့သည်။ “မြန်မာနိုင်ငံဟာ အခုဆိုရင် အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလကို ရောက်နေပါတယ်။ လူငယ်တွေက သူတို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဖန်တီးအားထုတ်မှုတွေထဲမှာ တခုခု လိုနေတယ်လို့ ခံစားနေကြရတယ်။ တကယ်တမ်းမှာတော့ မြန်မာ့စာပေဟာ အခုအချိန်မှာ ကမ်းခြေအသစ်တခုကို ရှာဖွေနေပါပြီ” ဟု ဒဂုန်တာရာက ပြောကြားခဲ့သည်။(၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လထုတ် ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းပါ Min Zin ၏ The Living History: Dagon Taya & Modern Burmese Literature ကို နိုင်မင်းသွင် ဘာသာပြန်သည်)http://burma.irrawaddy.org/archives/46716- Hla Kyaing, Recent Burmese News -
ဧရာဝတီ၊ ၁၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၃(ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အပါအ၀င် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင် ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံ ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသော စာရေးဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာအား ဧရာဝတီ စာတည်း ကိုစိုးက အာဇာနည်နေ့နှင့် ပတ်သက်သော အမှတ်တရများကို မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ် အောင်ပန်းမြို့တွင် နေထိုင်လျက် ရှိသည့် ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက်မှ ပြန်လည် ကောက်နုတ် ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)ကျနော်က အခု အသက် ၉၂ ထဲ ရောက်ပြီ။ အဲဒီ အာဇာနည်နေ့ပေါ့ဗျာ။ ၁၉၄၇ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်၊ အဲဒီတုန်းက ကျနော်လည်း ငယ် သေးတယ်။ ကျနော်က တက္ကသိုလ် သမဂ္ဂမှာ အမှုဆောင် ၂ နှစ် ဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့ သေးတယ်။ စစ်မဖြစ်ခင်ပေ့ါဗျာ၊ ၁၉၃၉ – ၄၀၊ အဲဒီတုန်းက ဥက္ကဌ က ကိုလှရွှေ၊ အာဏာရှင် လှရွှေ၊ အဲဒီတုန်းက အာဏာရှင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးက အကောင်းဗျ၊ ကောင်းတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီနှစ်တွေက ကျနော်က နေ့ကျောင်းသား နေခဲ့တယ်၊ ကျောင်းဆောင် ဘ၀ကတော့ ကျနော် စစ်ကိုင်းကျောင်း ဆောင်၊ ဟို တုန်းက အင်းဝ ၊ စစ်ကိုင်း၊ ပင်းယ ၊ ပဲခူး ဆိုပြီး ကျောင်းဆောင်တွေရှိတယ်၊ တက္ကသိုလ်ကိုတော့ ကျောင်းတိုက်လို့ ခေါ်တယ်၊ ကျနော်တို့က ကျောင်းနေဘက်တွေ ဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေလို ဖြစ်နေတာကိုး။အဲဒီ ၁၉၄၇ ကျတော့ ကျနော်က အသက် ၂၉ ၊ ၃၀ လောက်ပေါ့၊ အတိအကျ ဆိုရင် ပြန်တွက်မှရမယ်။ နောက်ဥက္ကဌ က မိတ္ထီလာ ကိုလှမောင်၊ ကျနော်တို့ထက်အများကြီး ကြီးတာပေါ့၊ ဦးနုတို့ တန်းပေါ့၊ ဦးနု လောက်တော့ မကြီးဘူး၊ ဦးနု ကို ကျနော်တို့က ကိုကြီးနု ခေါ်တယ်၊ သူတို့ကတော့ နိုင်ငံရေးလို့ နောင် အခါတော့ ခေါ်တာပေါ့ ဗျာ၊ လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှုပေါ့၊ တပ်ထဲက ဆိုလို့ရှိရင် ဗိုလ် လက်ျာ၊ ဗိုလ်ဇေယျ၊ ဗိုလ် ရန်အောင် အများကြီးပေါ့ဗျာ၊ ရဲဘော်သုံးကျိပ် ခေါ်တာပေါ့၊ အဲဒီတုန်းက နိုင်ငံရေး မဟုတ်သေးဘူး။ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ဆိုတာက ဟို အောက်စ်ဖို့ တို့၊ ကိန်းဘရစ်ခ်ျ တို့၊ လန်ဒန်မှာ ရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေ။ အဲဒီက သမဂ္ဂတွေအတိုင်း ဖွဲ့ထားတာ၊ အခြေအနေက အဲဒီလို။အဲဒီတုန်းက ကျနော်တို့က လွတ်လပ်ရေး လိုချင်တာပေါ့ဗျာ၊ ကျောင်းသားတွေ ၊ တက္ကသိုလ် သမဂ္ဂ၊ ၁၉၃၅-၃၆ ထင်တယ်၊ ကျောင်းသား သပိတ်ဖြစ်တယ်၊ ပညာရေး အတွက်ပေါ့၊ ကိုအောင်ဆန်းကတော့ ၁၉၃၈ – ၃၉ မှာ သမဂ္ဂ ဥက္ကဌ ဖြစ်တယ်၊ တို့ဗမာ အစည်းအရုံးမှာ သခင်အောင်ဆန်း ဖြစ်သွားတယ်။ကျနော်တို့ လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှုမှာ ကိုအောင်ဆန်းက ခေါင်းဆောင်လုပ်ခဲ့တာပေါ့။ သူ့ကို အများကြိုက်ကြတယ်၊ ကိုအောင်ဆန်း က စကားအပြော မတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ သူနဲ့ ပေါင်းလို့ ရတယ်။ သူက ကျနော့်ကို ခင်တယ်။အဲဒီတုန်းက မှတ်မိသေးတယ်၊ သူက သခင်အောင်ဆန်းလို့ ခေါ်မှ ကိုအောင်ဆန်း လို့ ခေါ်ရင် သိပ်မကြိုက်ချင်ဘူး၊ အဲဒီတုန်းက သမဂ္ဂက လူတွေကလည်း နိုင်ငံရေးလို့ ခေါ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုလုပ်ကြတာ၊ အဖွဲ့အစည်းလှုပ်ရှားမှု၊ ဦးနုက အဲဒီ ၃၅-၃၆ မှာ ဥပဒေ တန်း ပေါ့၊ ဟို တုန်းက ဥပဒေ တန်းတက်ချင်ရင် ဘီအေ အောင်ပြီးတဲ့ လူမှ တက်လို့ရတယ်၊ သခင်သန်းထွန်းက အဲဒီတုန်းက ဆရာဖြစ် သင် ကောလိပ်မှာ အောင်ပြီးပြီ၊ လူတော်ဗျ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးသမား လို့ ကျနော်က ထင်တယ်၊ နောက်မှ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူး။ကျနော်က အဲဒီကတည်းက ငြိမ်းချမ်းရေး စိတ်ကလေးက ရှိနေတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျနော်က အကြမ်းပတန်းတွေ သိပ်မကြိုက်ဘူး၊ အဲဒီအချိန်ကတည်းက စတာဗျ။ ကျောင်းသား သမဂ္ဂထဲမှာ ဒေါက်တာ ဘမော်တို့၊ ဒေါက်တာ ဘဟန်တို့ စတဲ့ သူတွေလည်း ရှိတယ်၊ လွတ်လပ်ရေး အတွက် လှုပ်ရှား သူတွေ၊ အရေးကြီးတဲ့ အချိန်တွေပေါ့၊ ကျနော့်ကို လည်း သူတို့က သမဂ္ဂ ဥက္ကဌ လုပ်စေချင်တယ်၊ ၁၉၄၁ လောက်ကပေါ့၊ ကျနော်ကလည်း ရှေ့တန်း သိပ်နေချင်တဲ့လူ မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီ တုန်း က ဗြီတိသျှ အင်ပါယာကို တိုက်ရမှာ၊ လက်နက်ကိုင်ရမယ်ပေါ့ ဗျာ၊ ကျနော်က လက်နက်ကိုင်တာ ၀ါသနာမပါဘူး၊ လက်နက် ကိုင်တာ သိပ်မကြိုက်ဘူး၊ ဟိုတုန်းက ကျနော့်ကို သူတို့က ခေါ်တာ အတွေးသမား အရေးသမား၊ စာရေးတဲ့ ကောင်က ကျနော် တယောက်ပဲ ရှိတာ၊ ဟိုတုန်းက စိတ်ကူးယဉ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးက မပေါ်သေးတော့ အတွေးသမားလို့ ပြောတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီ စနေနေ့ ကိုအောင်ဆန်းတို့ ကျဆုံးမယ့် နေ့က ဗိုလ်ထွန်းလှ ကို ကျနော်က ပြောတယ်၊ ကိုအောင်ဆန်း ကို ပြောလိုက်ပါ၊ ကျနော် ဆောင်းပါး လာယူမယ်၊ အဲဒီတုန်းက သူတို့က ၀န်ကြီးအဖွဲ့ပေါ့၊ ကိုအောင်ဆန်းက အရင် ပဲခူးကျောင်းဆောင်ကနေ ရေကျော်မှာရှိတဲ့ တို့ဗမာ အစည်းအရုံး ဌာနချုပ်မှာနေတယ်၊ သူအိပ်တာ ဖျာလေး တချပ်ပဲ ရှိတယ်၊ တခါတလေ ခေါင်းအုံးက မရှိဘူးနဲ့ တူပါတယ်၊ ခေါင်းက ဆီ က ဖျာမှာ ကွက်နေတယ်၊ အဲဒီမှာ ကျနော် ရောက်သွားတာ၊ ကျနော်က မသိဘူး။အတွင်းဝန် ရုံးကို ကျနော်ရောက်သွားတော့ ကျနော်က အပေါ်တက်သွားတာ၊ သူတို့ကျဆုံးတဲ့နေရာက အလယ်ခန်း၊ အ၀င်ပေါက် ပေါ့၊ ကျနော်က ၀င်သွားတာ၊ ဘာဖြစ်မှန်း ကျနော်က မသိဘူး၊ အဲဒီမှာ ဆရာဇော်ဂျီ (ဆရာ သိန်းဟန်)က အထူးအရာရှိ၊ သူ့အခန်း မှာ ဦးချန်ထွန်း ဆိုတာ ဖျာပုံကပဲ၊ သူက ခေါင်းစိုက်နေတယ်၊ ဒါနဲ့ ဆရာ သိန်းဟန်က ကျနော့်ကို မင်းမသိဘူးလားကွ၊ ဆိုတော့ ကျနော်က မသိသေးဘူးလို့၊ ဟာ ကိုယ်ကျိုးနည်းပြီကွ လို့ ပြောတယ်။ကျနော် ဘာတခုမှ နားမလည်ဘူး၊ ကျနော်တို့ အတွင်းဝန် ရုံးထဲမှာပဲရှိတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်စကား ပြောတယ်၊ မင်းမကြား ဘူးလားတဲ့၊ ဦစောလူတွေ သတ်သွားတာလို့ပြောတယ်၊ ဦးစောလို့ မပြောဘူး၊ ဆေးရုံပို့လိုက်ပြီ၊ ကိုအောင်ဆန်းကို အ၀တ်ဖြူ အုပ် ထားတယ်၊ သေသွားပြီ၊ ကျနော် “ဦးအောင်ဆန်း၏ နောက်ဆုံးနေ့”ဆောင်းပါးမှာ ရေးထားတယ်၊ ကျနော် အတွင်းဝန်ရုံးရောက် တော့ ကိုအောင်ဆန်းနဲ့ အာဇာနည်တွေကို သယ်သွားပြီ၊ ကျဆုံးတဲ့အချိန် ၁၀ နာရီခွဲဗျ၊ ကျနော် သွားတော့၊ ကျနော် ကိုအောင်ဆန်း နဲ့ ချိန်းထားတာ၊ မသိဘူးလေ။ ကျနော်က ၁၄ လမ်းမှာ နေတာကိုး။အဲဒီတုန်းကတော့ ဘာမှ မသိဘူးပေါ့လေ၊ ကျနော့် ဘ၀ မှာ ပထမဆုံး လုပ်ကြံမှုကို ကြုံရတာပဲ၊ ဦးစောအဖွဲ့ ဘာညာလည်း မသိ ဘူး၊ နောက်မှ သိတာ၊ သတ်တာတွေ လုပ်ကြံတာတွေ ပထမဆုံး ကျနော့် တသက်တာမှာ ကြုံဖူးတာပဲ။ဒေါက်တာ မောင်မောင်ရေးတဲ့ စာအုပ်ရှိတယ်၊ ခေါင်းစဉ်က ဘာဆိုလား၊ ပုဂံ စာအုပ်တိုက်က ထုတ်တာ၊ လုပ်ကြံတဲ့နည်းနဲ့ အာဏာ သိမ်းတာ ဦးစော လုပ်တာပဲ၊ သူ့အဖွဲ့က ဂဠုန် ပါတီလို့ ခေါ်တာလား၊ ဂဠုန် အဖွဲ့လို့ ခေါ်လားပဲ၊ မေးမှ ကျနော်လည်း စဉ်းစားရင်းနဲ့ ပြောရတာ၊ အဲဒီ ဂဠုန် ဦးစော ကို ကြိုးပေးတယ်လေ။၁၉၆၂ မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတာ စကြုံဖူးတယ်၊ ဗမာပြည်မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတာ အရင်က မကြားဖူးဘူး၊ နိုင်ငံရေး သိပ္ပံမှာ အစိုးရ ဆိုတာ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ဟာ အစိုးရပဲ၊ အာဏာ သိမ်းတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ အဲဒီမှာ စကြားဖူး တာပဲ၊ ဗိုလ်နေ၀င်း စအာဏာသိမ်းတာပဲ။ဒီဘက်မှာ ရွေးကောက်ပွဲက ၁၉၉၀ မှာ လုပ်တယ်လေ၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲအများဆုံး ရတာ NLD ။ အဲဒီတော့ အစိုးရဆိုတာ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားတာလို့ ကျနော်တို့က နားလည်ထားတာ၊ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းက တခါ အာဏာ သိမ်းတယ်၊ သြော် အာဏာသိမ်းအစိုးရ ရှိပါလား၊ အဲဒီလို အခြေအနေတွေက ပြောင်းသွားပြီဗျ၊ ကျနော်တို့ နားလည်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေး သိပ္ပံနဲ့က ၊ အခုက စစ်တပ် အာဏာသိမ်း အစိုးရ။တော်လှန်ရေးဆိုတာ အစိုးရကို တိုက်တဲ့ဟာ။ သူပုန်ပေါ့ဗျာ။ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ ရန်သူကို မိတ်ဆွေအဖြစ် ပြောင်းလဲ လာအောင် လုပ်တာ။ ကျနော်တို့လည်း ငယ်ငယ်တုန်းက သိပ်နားမလည်ဘူး။ ကြီးမှ သိလာတယ်။ လက်နက်နဲ့ အာဏာသိမ်း တယ်။ တရားမျှတတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနည်းနဲ့ အာဏာ သိမ်းရမယ်၊ ဒါပဲ။ငြိမ်းချမ်းရေးသာလျှင် ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး နည်းနဲ့သာ မိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်မယ်။ကျနော် ပြောချင်တယ်ဗျာ၊ အာဇာနည်နေ့ကိုလည်း ကျကျနန လုပ်စေချင်တယ်၊ အာဇာနည်တွေ ကျဆုံးတဲ့ အချိန်ကိုလည်း ဥသြ မှုတ်စေချင်တယ်၊ အရင်အတိုင်း ပုံမှန် လုပ်စေချင်တယ်၊ ကောင်းစေချင်တယ်၊ ဒါပါပဲ။ ။http://burma.irrawaddy.org/archives/44616- Hla Kyaing, Recent Burmese News -
ဒဂုန်တာရာ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးပန်ကြားလွှာ ၃ ငြိမ်းချမ်းရေးပန်ကြားလွှာ ၃
Writer Dagon Taryar opposed to Myitsone Dam project Wednesday, 28 September 2011 20:09 Ko Pauk New Delhi (Mizzima) – The well-known writer Dagon Taryar, 93, has issued his third “peace appeal” which strongly opposes the Myitsone Dam project to be built upstream on the Irrawaddy River. The appeal issued on Monday said that the Irrawaddy River has been badly damaged by human activities, and Myitsone Dam will further damage the beauty of the area and also undermine the chances of peace in the region. Dagon Taryar said the Irrawaddy River has existed naturally since immemorial times and the entire country owns it. “The Irrawaddy River existed when Burma appeared asacountry,” he said. “It is very long. It is the mega river. It belongs to the whole country. It doesn’t belong to China.” The Kachin Independence Organization sent an open letter to Chinese President Hu Jintao on March 16 that said the Myitsone Dam issue could lead to renewed civil war and should be suspended. Similarly, Aung San Suu Kyi issued an appeal on the Myitsone Dam project on August 11, which said the river had many problems, and she appealed for people to work to resolve the issues with the current government. “By joining hands together, we can resolve all problems of environment, economics, technology and politics,” Suu Kyi said in the letter. However, the government minister for Electrical Power No. 1, Zaw Min, toldagovernment workshop in September on the environmental impact of hydropower plant projects on the Irrawaddy River Valley that the Myitsone Dam project would continue based on governmental policies and the actions of Parliament.Earlier, Rakhine Nationalities Development Party General-Secretary Oo Hla Saw told Mizzima that if the decision on the dam project were left up to Parliament and the government only, it would not be fair. “I don’t think it will be fair if the decision on Myitsone Dam project is made by the Parliament only. The ruling party dominates Parliament and this Parliament cannot guarantee the freedom of individual MPs,” he said.Writer Dagon Taryar said the Burmese people should be allowed to join in deciding the issue. “Who started this project is important,” he said. “Who started it?” The Myitsone Dam project began in December 2009 at the time of the military junta led by Senior-General Than Shwe. China will receive 90 per cent of the 6,000 megawatts of electricity generated by the dam, which isajoint project carried out by the No. 1 Electricity Power Ministry and China Power Investment (CPI) Corporation. The project is being financed by China.
‘The peaceful way is the best way’ Wednesday, 10 August 2011 12:39 Mizzima News (Interview) – Burmese writer Dagon Taryar, 93,alifelong peace activist, recently urged government troops and ethnic armed groups to stop the fighting and startareal dialogue to establish peace, noting the extensive loss of life and damage to the country’s infrastructure. Dagon Taryar aka Htay Myaing attended the World Peace Council meetings held in Vienna, Austria in 1953 and the meeting held in Stockholm, Sweden in 1961. In 1974, he chaired the World Peace Council and worked in peace campaigns. Mizzima reporter Tun Tun talked with Dagon Taryar, who lives in Shan State.Question: You’ve sent outaprivate letter urging people across the country to work for peace.Answer: Yes. I delivered the letters in Rangoon too. I haveaman, Hla Maung, from Monywa. He distributed my letter to his close associates.Question: What did your letter say?Answer: I urged [the people] to make peace. I wanted to make people understand the phrase “People are not killed, the country is not ruined.” Obstacles may be encountered, but we will achieve peace, I hope.Question: Why did you think you needed to write suchaletter?Answer: The [peace] agreement has been broken. The soldiers [the Burmese government] took power by force. The army held the 2010 election. Now, the military junta [the military-dominated government] has come to power. First, we should make peace, so I wrote the letter. Initially, they may reject it. They seem to be filled with hate. As for me, even if I am forced to hate, I cannot.Currently, in our country the Burmese army is fighting against the Kachin, Chin, Karen, Mon, Shan and other ethnic people. In my opinion,acivil war has broken out. That’s not good, because they [the government] have hatred. The other side does not hate. But, the people and the soldiers from the government side hate [ethnic people]. They seem to be full of hate.Question: How deep are the problems in Burma now? Is there any hope forapositive solution to stop the fighting?Answer: Civil war will adversely affect the people. If it spreads, it can affect eating and drinking habits. It can affect health. It can shorten lifespans. I’m afraid that will happen. I have expected too much. People have potential. They can do it, and they know how to do it. The longeralifespan, the more chance people have to achieve peace. Without peace, nothing can be done. The military personnel do not have anything to be attached to. They are pitiful. They only have Korea [Korean films] to be attached to.I like peace. I want to live peacefully. People who disagreed with me did not like my phrase, “No enemy.” Now, half of them support me. Some people may think that if they support me, they will lose their dignity. That’s my opinion. Anyway, they have supported me. Many people talk about peace. The whole world says it wants peace. But, do they do as they say? Some people’s actions are different from their words. They are not making peace. I think that the next movement will be peace movement.Question: How is the current impasse in the political arena linked to peace in the country?Answer: Peace is important. Very important! Negotiations occurred in Burma before the military coup. Despite criticism, the Burmese people do not have hatred. All are good, honest and they like peace. Although they wanted to try to achieve peace, they were arrested [by the government]. The authorities beat them and arrested them.They are aggressive. The people who are armed with weapons think that weapons can achieve their goals. No. Weapons cannot. The world seems worse, I think. Problems are getting worse in Burma and in the Middle East too.Question: In your letter you wrote, “Bullets cannot provide security; only loving kindness can ensure security.”Answer: Loving kindness is the fundamental requirement in Buddhism. I think it is deep. The more we love and the stronger our love, the closer we are to peace. [If people have loving kindness], they will try to establish peace.Question: Do you haveamessage for government troops and the ethnic armed groups who are fighting?
Answer: I would like to urge them to make peace. It’s simple. If they sincerely make peace efforts, peace can be achieved. Both sides have chances to use weapons. I don’t expect too much. Now the country is ruined. Burma is ruined. I live in Shan State. The people in rural areas are inapitiful situation. They grow crops but the production falls. Moreover, the [consumer] prices have gone up. Peace is required for people to have enough money. Without peace, people cannot be prosperous. We cannot rely on weapons [fighting]. We need to use peaceful ways to avoid killing. Many people have been killed in the Middle East and Burma. Both are the same.Question: What kind of people does it take to form an effective peace movement?Answer: Peace can be achieved if you work for it. People of your age [about 30] are active. I worked for peace when I was your age. I took part in peace movements, but just by words. I’m not good at organizing. I admit that I don’t have the skills to do that. Young people are active. Their thoughts are strong and right. You [young people] don’t lie. I know you. People your age don’t lie. So, just do it. As for me, I’m old. As an elderly man, I’m physically weak. I feel frustrated. I may have ideas, but I cannot be as active as you. Young people are mentally strong and determined. So, I want to encourage the young to make efforts––peace can be achieved.Question: Do you haveafinal thought to leave with people who want to work for peace?Answer: Forming the Border Guard Forces provides the army with more soldiers and weapons. It makes [the government] stronger. It will be better if it can be dissolved. I mean you should try that via peaceful means. I hope you understand. The peaceful way is the best way.